ယူကရိန်းအရေး အပေါ် မြန်မာ့ရှုဒေါင့် အမျိုးမျိုး
ရုရှားတပ်တွေ ယူကရိန်းကို ဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေအကြား စိုးရိမ်မူနဲ့ သဘောထားမျိုးစုံရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတခုကို မတရားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် ကန့်ကွက်ကြသလို၊ တချို.ကလည်း အချုပ်အချာအာဏာကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ လက်ဦးမူယူတာလို့ ဆိုနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရော ဘယ်လို စိုးရိမ် သက်ရောက်စေနိုင်ပါလဲ။
ဒီအကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေအပြင်၊ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ USDP ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပြောခွင့်ရတို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ အခုလို့ ရုရှားက ယူကရိန်း ကို ဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အပေါ် ISP မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလေ့လာရေး အင်စတီကျု့အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်း က ....
ကိုအောင်သူငြိမ်း (ISP မြန်မာ ) ။ . ။ ဒါကတော့ တော်တော်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားဗျ။ ဒီစစ်ပွဲကို အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာစစ်အထိလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့်တော့ NATO ပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တယ်။ နောက်တခုက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဖက်က ကူမယ် စသဖြင့် ဒါတွေရှိတော့ ရှိတယ်။ နောက်တခုက ဒီစစ်ပွဲက မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက် စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ကျနော်မြင်တာကတော့ ရုရှားက အင်အားကြီးတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ယူကရိန်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတယ်လို့ မြင်တယ်ဗျ။ အဲတော့ ယူကရိန်း ဖက်ကတော့လည်း မဟာမိတ်တွေဖက်က ကူမယ်လို့သာ ပြောတယ် ။ လက်တွေ့မှာ ခက်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ မြန်မာအရေးကို အာရုံစိုက်မှု လျော့သွားမယ်ဗျ။ လူတွေက ယူကရိန်အရေး နဲ့ ကမ္ဘာ့အရေး အာရုံစိုက်လာလိမ့်မယ်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ သီပေါမြို့နယ်၊ လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွန်း ကလည်း
ဦးရဲထွန်း (သီပေါမြို့နယ် အမတ်ဟောင်း ) ။. ။ ယေဘူယျ အမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတခုကို အင်အားကြီး နိုင်ငံတခုက ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်သမိုင်းနောက်ခံနဲ့ အဓိက အချက်ကို သိရင်တော့ နဂိုလ်စစ်အေး တိုက်ပွဲကာလက စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလ က အရှေ့အုပ်စု နဲ့ အနောက်အုပ်စု မယုံမကြည်ဖြစ်ရာက မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ အရှေ့အုပ်စုက စစ်အေး တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ဝါဆောစစ်စာချုပ် ပြိုသွားပြီးတော့ သူရဲမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကလည်း အနောက်အုပ်စု နေတိုး အုပ်စုထဲရောက်သွားတယ်။ နောက်တခါ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကလည်း ပြိုသွားတဲ့ ၁၅ နိုင်ငံထဲက အက်စတိုးနီးယား တို့ လက်ဗီးယား တို့ ဒီနိုင်ငံတွေကလည်း ဝင်သွားတဲ့အခါကြတော့ သူတောင်းဆိုတာက နေတိုးအဖွဲ့ တိုးချဲ့တာကို ရပ်ဆိုင်းပေးပါ။ နောက် အရှေ့ဥရောပက နေတိုး တပ်တွေဆုတ်ပေးပါ။ နောင်ဆုံး ရုရှားက ကျူးကျော်ပြီးတော့ သေချာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ ကေအင်ယူ ပြောခွင့်ရနဲ့ နိုင်ငံခြားရေး အကြီးအကဲ ဖဒို စောတောနီ ကလည်း
ဖဒိုစောတောနီ ။. ။ ယူကရိန်အနေ့ နဲ့ ဆိုဗီယက် ခွဲထွက်ပြီးတော့ သူမှာ အနုမြူလက်နက်တွေ
ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြည့်ရတာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖက်မှာ တော်တော်ပျော်နေပုံပဲ။ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ရုရှားအနေအထားမှာတော့ လျှော့တွက်လို့မရဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဒေါက်တာ လှမြင့် ကတော့
ဒေါက်တာ လှမြင့် (ကြံခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ) ။. ။ နိုင်ငံတိုင်းဟာ မိမိအကျိုးစီးပွားအဓိကထားခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး အမေရိကန် ၊ ရုရှား ဆိုတာ မိမိနိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားကို အဓိကထားကြပါတယ်။ ရုရှားအနေနဲ့ ကြည့်ရင် ယူကရိန် နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖို့ကြည့်တာဟာ အချုပ်အခြာငကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကြည့်ရင်း လက်ဦးမှု ရယူတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီကနေ နိုင်ငံတိုင်းဟာ မိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် မိမိနိုင်ငံ အချုပ်အခြာအကျိုးစီးပွား အတွက် စစ်ကောင်စီ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း ပြောသလို မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ဦးမိုဇော်ဦး က ပြောပါတယ်။
ဦးမိုဇော်ဦး (ဦးမိုးဇော်ဦး ၊ NUG ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး )။. ။ ကျနော်ကတော့ အချုပ်အခြာနိုင်ငံတခုကို အခုလိုမလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပုံစံတခုချမှတ်တာတော့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီကလည်း ဒါကို ဆန့်ကျင်နေတာ။ ကျနော်တို့ကလည်း အတူတူပါပဲ။ သို့သော် ရုရှားကနေ စစ်ကောင်စီ ကို လက်နက်ရောင်းနေတာရှိပါတယ်။ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ကူးစက်မှာတော့ မလိုလားပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ ဥရောပဖြစ်နေတာကတော ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲကို ကူးစက်လာမှာကို စိုးရိမ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာအပေါ် ယူကရိန်းအရေး ဂယက် မြန်မာတချို့အမြင်
ယူကရိနျးအရေး အပျေါ မွနျမာ့ရှုဒေါငျ့ အမြိုးမြိုး
ရုရှားတပျတှေ ယူကရိနျးကို ဝငျတိုကျခိုကျတဲ့အပျေါ မွနျမာနိုငျငံက အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ လလေ့ာသုံးသပျသူတှအေကွား စိုးရိမျမူနဲ့ သဘောထားမြိုးစုံရှိနပေါတယျ။ ဒါဟာ အခြုပျအခြာအာဏာပိုငျနိုငျငံတခုကို မတရားဝငျရောကျတိုကျခိုကျတာကွောငျ့ ကနျ့ကှကျကွသလို၊ တခြို.ကလညျး အခြုပျအခြာအာဏာကို ကွိုတငျကာကှယျဖို့ လကျဦးမူယူတာလို့ ဆိုနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံအပျေါရော ဘယျလို စိုးရိမျ သကျရောကျစနေိုငျပါလဲ။
ဒီအကွောငျး နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူတှအေပွငျ၊ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ၊ KNU ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံးနဲ့ USDP ပွညျထောငျစုကွံခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ ပွောခှငျ့ရတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ အခုလို့ရုရှားက ယူကရိနျး ကို ဝငျတိုကျလိုကျတဲ့အပျေါ ISP မွနျမာမဟာဗြူဟာနဲ့ မူဝါဒလလေ့ာရေး အငျစတီကြု့အဖှဲ့ ဒါရိုကျတာ ဦးအောငျသူငွိမျး က .......
ကိုအောငျသူငွိမျး (ISP မွနျမာ ) ။ . ။ ဒါကတော့ တျောတျောစိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ အနအေထားဗြ။ ဒီစဈပှဲကို အဆုံးမသတျနိုငျဘူးဆိုရငျ ကမ်ဘာစဈအထိလညျး ဖွဈသှားနိုငျတာပေါ့နျော။ အထူးသဖွငျ့တော့ NATO ပါဝငျပတျသကျလာနိုငျတယျ။ နောကျတခုက အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုဖကျက ကူမယျ စသဖွငျ့ ဒါတှရှေိတော့ ရှိတယျ။ နောကျတခုက ဒီစဈပှဲက မထိနျးနိုငျ မသိမျးနိုငျဖွဈသှားနိုငျတယျ။ အဲဒီအတှကျ စိုးရိမျရပါတယျ။ ကနြျောမွငျတာကတော့ ရုရှားက အငျအားကွီးတယျ။ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ယူကရိနျကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ အနအေထားရှိတယျလို့ မွငျတယျဗြ။ အဲတော့ ယူကရိနျး ဖကျကတော့လညျး မဟာမိတျတှဖေကျက ကူမယျလို့သာ ပွောတယျ ။ လကျတှမှေ့ာ ခကျမယျလို့ ကနြျောထငျတယျ။ မွနျမာအရေးကို အာရုံစိုကျမှု လြော့သှားမယျဗြ။ လူတှကေ ယူကရိနျအရေး နဲ့ ကမ်ဘာ့အရေး အာရုံစိုကျလာလိမျ့မယျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ သီပေါမွို့နယျ၊ လှတျတျောအမတျဟောငျး တဦးဖွဈတဲ့ ဦးရဲထှနျး ကလညျး
ဦးရဲထှနျး (သီပေါမွို့နယျ အမတျဟောငျး ) ။. ။ ယဘေူယြ အမွငျနဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ အခြုပျအခွာအာဏာပိုငျ နိုငျငံတခုကို အငျအားကွီး နိုငျငံတခုက ဝငျရောကျသိမျးပိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျသမိုငျးနောကျခံနဲ့ အဓိက အခကျြကို သိရငျတော့ နဂိုလျစဈအေး တိုကျပှဲကာလက စဈအေးတိုကျပှဲကာလ က အရှအေု့ပျစု နဲ့ အနောကျအုပျစု မယုံမကွညျဖွဈရာက မဟာမိတျဖှဲ့ကွတာပေါ့ဗြာ။ အရှအေု့ပျစုက စဈအေး တိုကျပှဲပွီးဆုံးသှားတဲ့အခါမှာ ဝါဆောစဈစာခြုပျ ပွိုသှားပွီးတော့ သူရဲမဟာမိတျနိုငျငံတှကေလညျး အနောကျအုပျစု နတေိုး အုပျစုထဲရောကျသှားတယျ။ နောကျတခါ ဆိုဗီယကျပွညျထောငျစုကလညျး ပွိုသှားတဲ့ ၁၅ နိုငျငံထဲက အကျစတိုးနီးယား တို့ လကျဗီးယား တို့ ဒီနိုငျငံတှကေလညျး ဝငျသှားတဲ့အခါကွတော့ သူတောငျးဆိုတာက နတေိုးအဖှဲ့ တိုးခြဲ့တာကို ရပျဆိုငျးပေးပါ။ နောကျ အရှေ့ဥရောပက နတေိုး တပျတှဆေုတျပေးပါ။ နောငျဆုံး ရုရှားက ကြူးကြျောပွီးတော့ သခြောအောငျလုပျလိုကျတဲ့ သဘောပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ကအေငျယူ ပွောခှငျ့ရနဲ့ နိုငျငံခွားရေး အကွီးအကဲ ဖဒို စောတောနီ ကလညျး
ဖဒိုစောတောနီ ။. ။ ယူကရိနျအနေ့ နဲ့ ဆိုဗီယကျ ခှဲထှကျပွီးတော့ သူမှာ အနုမွူလကျနကျတှေ
ကနျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူကွညျ့ရတာတော့ ငွိမျးခမျြးရေးဖကျမှာ တျောတျောပြျောနပေုံပဲ။ နှဈပေါငျး ၃ဝ ကွာတဲ့အခါမှာတော့ ရုရှားအနအေထားမှာတော့ လြှော့တှကျလို့မရဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကွံခိုငျရေးပါတီ ဒေါကျတာ လှမွငျ့ ကတော့
ဒေါကျတာ လှမွငျ့ (ကွံခိုငျဖှံဖွိုးရေးပါတီ) ။. ။ နိုငျငံတိုငျးဟာ မိမိအကြိုးစီးပှားအဓိကထားခဲ့ကွတဲ့အတှကျ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီး အမရေိကနျ ၊ ရုရှား ဆိုတာ မိမိနိုငျငံ အကြိုးစီးပှားကို အဓိကထားကွပါတယျ။ ရုရှားအနနေဲ့ ကွညျ့ရငျ ယူကရိနျ နတေိုးအဖှဲ့ဝငျဖို့ကွညျ့တာဟာ အခြုပျအခွာငကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသားအကြိုးစီးပှားကွညျ့ရငျး လကျဦးမှု ရယူတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒီကနေ နိုငျငံတိုငျးဟာ မိမိနိုငျငံအကြိုးစီးပှားကို ကာကှယျဖို့လိုအပျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ မိမိနိုငျငံ အခြုပျအခွာအကြိုးစီးပှား အတှကျ စဈကောငျစီ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး ပွောသလို မလုပျသငျ့ပါဘူးလို့ ဦးမိုဇျောဦး က ပွောပါတယျ။
ဦးမိုဇျောဦး (ဦးမိုးဇျောဦး ၊ NUG ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး )။. ။ ကနြျောကတော့ အခြုပျအခွာနိုငျငံတခုကို အခုလိုမလုပျသငျ့ဘူးထငျပါတယျ။ နိုငျငံရေးပုံစံတခုခမြှတျတာတော့ရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာနိုငျငံအသီးသီကလညျး ဒါကို ဆနျ့ကငျြနတော။ ကနြျောတို့ကလညျး အတူတူပါပဲ။ သို့သျော ရုရှားကနေ စဈကောငျစီ ကို လကျနကျရောငျးနတောရှိပါတယျ။ မဟာဗြူဟာမွောကျ ဆကျဆံရေးရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ နိုငျငံကို ကူးစကျမှာတော့ မလိုလားပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ ဥရောပဖွဈနတောကတော ကမ်ဘာ့စဈပှဲကို ကူးစကျလာမှာကို စိုးရိမျနရေပါတယျခငျဗြာ။
ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်တဲ့ ရုရှား အထိနာအောင် ဒဏ်ခတ်မည် (သမ္မတ Biden)
ယူကရိန်းအပေါ် ရုရှားကျူးကျော်မှု တရုတ် သတိထား တုံ့ပြန်